Jacqueline Godet: "La dagaallanka kansarku waa ganacsi qof walba" - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB Jacqueline Godet: "Dagaalka kansarku waa ganacsi kasta"
Jacqueline Godet: "La dagaallanka kansarku waa ganacsi qof walba"
Madaxwaynaha Ururka Ka hortaga Kansarka waa martida Khamiista 11 April Occitan.
Sidee ayaa loola dagaallamayaa kansarka maanta lagu qabtay Faransiiska?
Kooxda ayaa door muhiim ah ka ciyaartay intii lagu jiray dawladaha guud ee kansarka ee 1998. Tani waa meesha asal ahaan ka soo jeedda Qorshaha Kansarka iyo machadka Kansarka Qaranka. Waa maxay asalka Faransiiska ee la dagaallanka kansarka marka la barbar dhigo wadamada kale waa guusha qorshaha Kansarka. Waxaan joognaa saddex. Urur goboleedka ayaa sidoo kale awood leh tan iyo markii ay haysato 7 kansar oo ku yaal France. Waxay sameeyaan dhammaan kuwa ka shaqeeya dagaalka ka dhanka ah cudurkan: xirfadlayaasha caafimaadka, kuwaas oo aan ilaa hadda haysan federaal, cilmi baarayaal, iwm. Canceropoles ayaa door muhiim ah ka ciyaartay qaabeynta la dagaallanka kansarka. Kuwani waa qalab aad u firfircoon: saamayntoodu waa wax aad u fiican oo ku jira shaqada wadajirka ah ee aan ka jirin waddooyinka kale.
Maxaad u maleyneysaa?
Waxaan ka fekerayaa Qorshaha Alzheimers oo aan lahayn wax saameyn ah oo tababar ah sida qorshaha kansarka tusaale ahaan. Maxay farqiga u sameeyeen abuurista Machadka Qaranka ee Kansarka, oo ah hay'ad dawladeed. Waa gacanta hubaysan ee gobolka, kaas oo siinaya xoog badan oo gaar ahaan tarjumaadda hawlgalka ee doonista siyaasadeed.
Sidee ayey u badan tahay kansarka? Ma aragnaa koror kiisaska?
Waxaan aragnaa kordhin joogto ah oo kansar ah marka laga reebo Occitania halkaas oo aan ku xasuusino xasillooni yar. Tirada kiisaska ayaa sii kordhaya, gaar ahaan da'da dadka da'da ah: kuwa weyn oo aan helno, inaga ayaa inaga badan oo nasiib darro ah si aan u aragno suurtogalnimada dhacdooyinka korodhka kansarka. Waxa kale oo aanu ognahay kororka kansarka naasaha ee gabdhaha dhallinyarada ah. Waxaan hadda baadhaynaa sababta dumarka da'doodu ka yar tahay 35 ay yihiin dhibbanayaal. Wadar ahaan, waxaan ku ogaaneynaa xaaladaha kansarka 350 000 sannadkiiba oo France ah waxaanan la kulannaa dhimashada 157 000.
Daaweyntu ma sameeyaan horumar joogto ah?
Celcelis ahaan, waxaan ku maamuli karnaa 60% kansarrada iyo xataa 80% carruurta iyo dhallinyarada. Meesha ay natiijooyinka ugu adag tahay in la helo waa burooyinka maskaxda ee carruurta ama kansarka fanka ee dadka waaweyn. Muddo toddoba iyo sideed sano ah, horumarka ugu awooda badan ee immunotherapy waa in la abaabulo habka difaaca bukaanka si loola dagaallamo unugyada kansarka. Daaweynta Targeted ee u ogolaatay isticmaalka daroogooyinka aqoonsada unugyada kansarka ayaa sidoo kale muujinaya waxtarka sii kordhaya.
Maxaad u sheegeysaa in qof kastaa leeyahay door ah inuu ka ciyaaro dagaalka?
Dhammaanteen waxaan doorannaa inaan ka hortagno kansarka adoo bedelaya sida aan u noolahay: Dhammaan muwaadiniinta, ma ahan kaliya daryeelayaasha ama cilmi baarayaasha, waxay dib udhigi karaan kansarka!
Jacqueline Godet wuxuu noqon doonaa marti sharaf ka mid ah 24es Rencontres d'Occitanie kaas oo ka dhici doona Khamiista, Xarunta dhexe ee La Dépêche du Midi ee Toulouse. Madaxa Ururka Laanqayrta Cas ee Cancer wuxuu faahfaahin ka bixinayaa tallaabada ururkeed. www.rencontres-occitanie.fr
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.midilibre.fr/2019/04/10/jacqueline-godet-lutter-contre-le-cancer-est-laffaire-de-tous,8121540.php
Kansarka: Wuxuu la dagaallamaa xaaskiisa si uu u helo lafaha lafaha
Jihada ayaa u dhimata daacuunka Waqooyiga
NASA waxay maalgelisay mashaariicda 18 taas oo loola jeedo in lagu beddelo tiknoolajiyada banaan. Halkan waa liiska
Wuu sakhraansan yahay, wuxuu aqbalaa in qolkiisa uu gooyay guskiisa 200 €
Youtube: WACS. Naples-Arsenal: waxay ka heleysaa haweenka ciyaartoyda labada kooxood sawirada
Morocco: Morocco waxay u adeegi doontaa saldhig u ah Faransiiska Orange Cyberdefense si ay u dejiso Afrika
Mueller ayaa muujinaya dadaalka Trump si looga hortago baaritaanka Ruush ee warbixinta aadka loo sugayo - New York Times
DADKA & LIFESTYLE3,084